Keywords, Afọ Frequency na SEO
Mkpa Ọdịnaya Ọhụrụ maka SEO
Tọzdee, Nọvemba 10, 2011 Thursday, July 18, 2013 Douglas Karr
Agwara m ndị mmadụ ogologo oge na ilu ochie maka ịre ahịa metụtara ọdịnaya, kwa. Ntughari, oge na uru nke ọdịnaya bụ isi. Nke a bụ ihe kpatara ya ịde blọgụ bụ isi ihe dị mkpa na usoro azụmaahịa ọdịnaya… ọ na - enye gị ohere ide mgbe ụfọdụ. Chaatị dị n'okpuru bụ otu n'ime ndị ahịa anyị. Anyị kachasị saịtị ha mma ma, yana ụfọdụ nkwalite ọwapụ saịtị, ha wụlitere n'ọkwa asọmpi asọmpi.
Agbanyeghị, mgbe ọnwa ole na ole nwetachara ọdịnaya dị iche iche dị iche iche na-esiri ike. Ndị otu na-ede ọdịnaya ahụ nọ na-arụsi ọrụ ike nke mere na anyị goro ha onye edemede ọdịnaya. Mgbe ụlọ ọrụ ahụ lekwasịrị anya na ngwaahịa na ozi ọma ya, onye na-ede akwụkwọ anyị lekwasịrị anya na ndụmọdụ zuru oke na omume kachasị mma maka ụlọ ọrụ ahụ. Naanị anyị nyere ọtụtụ isiokwu isiokwu dị iche iche na-agaghị adọkpụ, yana ndị ọzọ!
Chaatị si Semrush, nke weghaara ngalaba aha di elu na nde 60 ranking. Ọbụghị naanị na onye ahịa a mụbara ọnụ ọgụgụ nke isiokwu ha bụ ogo maka, ha mekwara ka ọkwa ha dum dịkwuo mma. Ekwela ka saịtị gị nweta ihe ọdịnaya.
Inye na-adịbeghị anya, ugboro ugboro na ndị bara uru ọdịnaya agaghị naanị ụgbọala nleta, ọ ga-enyere gị search engine njikarịcha!
Tags: content MarketingKeywordssearch engine njikarịchaA
Google na Facebook na Nzuzo
Geosocial na Ọnọdụ Dabere na Onye Nkuchi
Nov 10, 2011 na 5:51 PM
Doug, dịkwa mma, ọ bụ ọdịnaya nke mere ka metrik ha, ma ọ bụ omume ndị mmadụ mere mgbe ha hụrụ ọdịnaya ahụ? A na-adọghachi m azụ n'eziokwu site na post "Nọmba Ọnọdụ" gị (https://martech.zone/numbers-matter/ ). 😉 Jọn
Nov 10, 2011 na 5:54 PM
N'okwu a, ha enweghị ọdịnaya na isiokwu ndị ọzọ ha kwesiri ịhazi. Na nkenke, ịnweghị ike ịkwado na nchịkọta nke isiokwu dị iche iche n'enweghị n'ezie ibe ndị kpọtụrụ aha ha! 🙂